Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ibu Ọnụ? Baịbụl Ọ̀ Kwadoro Ka Ndị Kraịst Na-ebu Ọnụ?
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ibu Ọnụ?
N’oge ochie, Chineke kwadoro ibu ọnụ ma ọ bụrụ na e bu ihe kwesịrị ekwesị n’obi na-ebu ya. Ma, ọ naghị amasị Chineke ma ọ bụrụ na a na-ebu ọnụ naanị iji mezuo iwu. Nke bụ́ eziokwu bụ na n’oge anyị a, Baịbụl enyeghị iwu ka a na-ebu ọnụ, ọ sịghịkwanụ onye ebukwala ọnụ.
Olee ihe ndị mere ụfọdụ ndị e kwuru gbasara ha na Baịbụl ji buo ọnụ?
Mgbe mmadụ chọrọ ka Chineke nyere ya aka ma ọ bụ ka o duzie ya. Ndị Izrel na-alaghachi Jeruselem buru ọnụ iji gosi na arịrịọ ha nọ na-arịọ Chineke ka o nyere ha aka si ha n’obi. (Ezra 8:​21-​23) Pọl na Banabas kpebiri ibu ọnụ mgbe ụfọdụ ma ha họpụtawa ndị okenye ọgbakọ.​—Ọrụ Ndịozi 14:23.
Mgbe mmadụ chọsiri ike ka nzube Chineke mee. Mgbe Jizọs mechara baptizim, o buru ọnụ ụbọchị 40 iji kwadebe onwe ya ime uche Chineke n’ozi ọ na-aga ije.​—Luk 4:​1, 2.
Mgbe mmadụ na-egosi na ya echegharịala ná mmehie ndị o mere n’oge gara aga. Chineke si n’ọnụ Joel onye amụma gwa ndị Izrel na-enupụrụ ya isi, sị: “Jirinụ obi unu dum, na ibu ọnu na ịkwa ákwá na iti mkpu arịrị lọghachikwute m.”​—Joel 2:​12-15.
N’Ụbọchị Mkpuchi Mmehie. Ihe so n’Iwu Chineke nyere mba Izrel bụ na ha ga na-ebu ọnụ kwa afọ n’Ụbọchị Mkpuchi Mmehie. * (Levitikọs 16:​29-​31) Ibu ọnụ n’ụbọchị ahụ dabara adaba n’ihi na ọ na-echetara ndị Izrel na ha ezughị okè nakwa na ọ dị ha mkpa ka Chineke gbaghara ha.
Olee ụfọdụ ihe na-ekwesịghị ekwesị a na-ebu n’obi ebu ọnụ?
Ime ka a sịkwa. Jizọs kụziri na ibu ọnụ bụ okwu aka mmadụ, nke gbasara naanị onye ahụ na Chineke.​—Matiu 6:​16-​18.
Mmadụ ime ka ọ̀ bụ onye ezi omume. Ibu ọnụ anaghị eme ka mmadụ kara ndị ọzọ mma, ọ pụtaghịkwa na ọ bụ onye ahụ kacha ekpere Chineke.​—Luk 18:​9-​14.
Mmadụ ime ya ka o jiri ya kagbuo ihe ọjọọ o leziri anya na-eme. (Aịzaya 58:​3, 4) Ọ bụ naanị onye na-erubere Chineke isi, nke jikwa obi ya niile chegharịa ná mmehie ya, ka ọ na-anabata ọnụ ọ na-ebu.
Iji mezuo iwu okpukpe mmadụ na-ekpe tiri. (Aịzaya 58:​5-7) Otú ahụ ọ na-ewute ndị mụrụ ụmụ ma ụmụ ha na-erubere ha isi naanị iji mezuo iwu, ka ọ na-adịkwa Chineke ma anyị na-ebu ọnụ n’ihi na e tiri ya n’iwu.
Ọ̀ bụ iwu na Ndị Kraịst ga na-ebu ọnụ?
Mba. Chineke nyere iwu ka ndị Izrel buo ọnụ n’Ụbọchị Mkpuchi Mmehie. Ma, o wepụrụ iwu ahụ mgbe Jizọs kpuchiri kpam kpam mmehie nke ndị ji obi ha niile chegharịa. (Ndị Hibru 9:​24-​26; 1 Pita 3:​18) A gwaghị Ndị Kraịst ka ha na-edebe Iwu Mozis, nke Ụbọchị Mkpuchi Mmehie bụ otu n’ime ya. (Ndị Rom 10:4; Ndị Kọlọsi 2:​13, 14) N’ihi ya, ọ bụ Onye Kraịst ọ bụla ga-ekpebi ma ọ̀ ga-ebu ọnụ ma ọ gaghị ebu.​—Ndị Rom 14:​1-4.
Ndị Kraịst ma na e jighị ibu ọnụ amata ezigbo ndị na-efe Chineke. Baịbụl ekwughịkwa na ibu ọnụ na-eme ka mmadụ na-enwe obi ụtọ. Kama, e ji ọṅụ mara Ndị Kraịst na-ekpere Chineke otú ọ chọrọ, otú ahụ e jikwa ya mara Jehova, bụ́ Chineke “onye obi ụtọ.”​—1 Timoti 1:11; Ekliziastis 3:​12, 13; Ndị Galeshia 5:22.
Echiche na-ezighị ezi ndị e nwere banyere ihe Baịbụl kwuru gbasara ibu ọnụ
Echiche na-ezighị ezi: Pọl onyeozi kwuru ka di na nwunye bụ́ Ndị Kraịst na-ebu ọnụ.​—1 Ndị Kọrịnt 7:​5, King James Version.
Nke bụ́ eziokwu: Ihe odide ndị kacha ochie e ji sụgharịa Baịbụl akpọghị ibu ọnụ aha ná 1 Ndị Kọrịnt 7:5. * Ihe a gosiri na ọ bụ ndị depụtaghachiri ihe odide ahụ denyere ibu ọnụ, ma n’ebe a ma na Matiu 17:21; Mak 9:​29; nakwa n’Ọrụ Ndịozi 10:30. Ọtụtụ nsụgharị Baịbụl n’oge anyị a anaghị ekwe etinye ebe ndị a a gbakwụnyere ibu ọnụ.
Echiche na-ezighị ezi: Ndị Kraịst kwesịrị ibu ọnụ iji na-echeta abalị iri anọ ahụ Jizọs buru ọnụ n’ala ịkpa mgbe o mechara baptizim.
Nke bụ́ eziokwu: E nweghị mgbe Jizọs kwuru ka e buo ụdị ọnụ a, e nweghịkwa ihe dị na Baịbụl gosiri na Ndị Kraịst oge mbụ buru ụdị ọnụ a. *
Echiche na-ezighị ezi: Ndị Kraịst kwesịrị ịna-ebu ọnụ n’oge a na-echeta ọnwụ Jizọs.
Nke bụ́ eziokwu: Jizọs ekwughị ka ndị na-eso ụzọ ya buwe ọnụ n’oge ha ji echeta ọnwụ ya. (Luk 22:​14-​18) Ọ bụ eziokwu na Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya ga-ebu ọnụ ma ọ nwụọ, o nyeghị ha ya ka iwu, kama ihe o kwuru bụ naanị ihe ga-emecha mee. (Matiu 9:​15) Baịbụl gwara Ndị Kraịst ka onye agụụ na-agụ rie ihe n’ụlọ tupu ha abịawa Ncheta Ọnwụ Jizọs.​—1 Ndị Kọrịnt 11:​33, 34.
^ par. 8 Chineke gwara ndị Izrel, sị: “Unu ga-emekpa mkpụrụ obi unu ahụ́,” ma ọ bụ “taa mkpụrụ obi unu ahụhụ,” n’Ụbọchị Mkpuchi Mmehie. (Levitikọs 16:​29, 31; King James Version) E weere ya na ihe a na-ekwu gbasara ya ebe a bụ ibu ọnụ. (Aịzaya 58:3) N’ihi ya, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society bipụtara sụgharịrị amaokwu ahụ otú a: “Ọ bụ . . . ụbọchị unu ga-ebu ọnụ, ya bụ, ụbọchị ịtụgharị uche na nchegharị n’ime obi unu.”
^ par. 19 Gụọ ihe e dere n’akwụkwọ bụ́ A Textual Commentary on the Greek New Testament, nke Bruce M. Metzger dere, Mbipụta nke Atọ, peeji nke 554.
^ par. 21 Akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia kwuru banyere ụbọchị iri anọ ahụ e ji ebu ọnụ a na-akpọ Lent, sị: “N’ime narị afọ atọ ka ndịozi Jizọs nwụchara, oge e ji ebu ọnụ iji kwadebe maka ememme Ista anaghị agafe otu izu; ọ na-abụkarị otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ. . . . Ọ bụ ná nnọkọ ahụ ndị ụkọchukwu nwere na Naịsia ka e kwutetụrụ ihe gbasara ibu ọnụ ụbọchị iri anọ. Ma, ụfọdụ ndị ọkà mmụta na-ekwudị na ọ bụghị Lent ka e bu n’uche.”​—Mbipụta nke Abụọ, Mpịakọta nke 8, peeji nke 468.
Gịnị Mere Na Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Ebughị Ọnụ?